Robben oo doortay macalinkii ugu fiicnaa uu ka soo hoos ciyaaray… (Mourinho, Heynckes mise Guardiola?) – Gool FM
Robben oo doortay macalinkii ugu fiicnaa uu ka soo hoos ciyaaray… (Mourinho, Heynckes mise Guardiola?)
Dajiye August 23, 2021
(Yurub) 23 Agoosto 2021. Halyeeyga reer Holland iyo kooxaha Bayern Munich, Real Madrid iyo Chelsea ee Arjen Robben, ayaa doortay tababarihii ugu fiicnaa ee uu ka hoos ciyaaray xirfadiisa ciyaareed.
Arjen Robben ayaa wuxuu ka soo hoos shaqeeyay macallimiin badan oo waaweyn, sida Jose Mourinho, Louis van Gaal, Jupp Heynckes iyo Carlo Ancelotti, laakiin ma uusan ka labalabeyn inuu u doorto Pep Guardiola tababaraha ugu fiican ee uu ka soo hoos shaqeeyay.
Robben ayaa ka jawaabay su’aal ku saabsanayd tababarihii ugu fiicnaa ee uu ka hoos ciyaaray, wuxuuna yiri:
“Pep Guardiola, waa go’aan adag, sababtoo ah waxaan ku noolaa waqtiyo badan muhiim ah oo macallimiin badan, laakiin haddii aad i weydiiso yaa ugu fiican, waxaan kuu sheegi doonaa Guardiola, marka uu ka hadlayo kubadda cagta, waa cajiib.”
“Markii uu Pep yimid Bayern waxaan jiray 30 sano, da’adaan waxaad ku fikireysaa inaad heerkaada kor u qaaddo oo aadan dib u dhicin, laakiin awaamirtiisa, waan soo fiicnaanayay.”
“Si lama filaan ah waxaan uga ciyaaray boosaska garoonka oo aanan waligay ku fikirin inaan ka ciyaari doono, aniga ahaan, Pep ayaa ugu fiicnaa.”
“Qof kasta oo wajahaya Paris Saint-Germain dhibaato ayuu la kulmi doonaa.” – Donnarumma
Paris Saint-Germain oo ay ku waajibtay inay Kylian Mbappe iska iibiso xagaagan... (Maxaa soo kordhay?)